किन गाँजा खान्छन् नागा बाबा - IAUA
किन गाँजा खान्छन् नागा बाबा
ramkrishna December 4, 2017	interesting
गाँजा–भाङ किन खान्छन् ?
आम मानिसले बिहान उठेर जलस्नान लिने गर्छन् । नागा बाबाहरू भने उठ्नेबित्तिकै भष्मस्नान गर्छन् । टाउको र शरीरमा भष्म दल्छन् ।
जाडो छल्न उनीहरूले यसो गरेका हुन् । हाम्रो शरीरमा प्रत्येक रौँको फेदमा प्वाल हुन्छ । त्यही प्वालबाट सिरेटो भित्र छिरेपछि जाडो हुन्छ । शरीरमा खरानी दलेपछि यस्ता प्वाल टालिन्छन् र जाडो हुँदैन । बाबाहरू कहिल्यै नुहाउँदैनन् । यसले गर्दा टाउकोमा जुम्रा पर्ला भनेर उनीहरू टाउकोमा पनि भष्म दल्छन् । भष्म दलेको टाउकोमा जुम्रा पर्दैन ।
गाँजाले शरीरमा ताप उत्पन्न गराउँछ । रीत पुर्‍याएर खाँदा यसले पेट सफा गर्छ । पहिले–पहिले नाकबाट गाँजा खाएर मलद्वारबाट धुवाँ फाल्ने योगविधिको अभ्यास हुन्थ्यो रे । यसो गर्दा पेट पूरै सफा हुन्थ्यो । तर, यस्तो कठिन योगविधि अभ्यास भएको अहिले पाइँदैन ।
महाशिवरात्रिमा गाँजा खानुपर्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । गाँजा खानुको र भष्मधारण गर्नुको तान्त्रिक पक्ष पनि केही छैन । फगत जाडो छल्नलाई यस्तो गरिएको हो ।
पहिले–पहिले हिमालयमा बाबाहरू नांगै बस्ने गर्थे । त्यागको अवस्थामा पुगेका यसरी बस्ने गर्थे । उनीहरू विशेष गरी वस्त्र र अन्नपानी त्याग्ने गर्थे ।
हिमालमा रुदन्ती भन्ने बुटी पाइन्छ । पानको पात आकारको यसको टुप्पोबाट शिशिर ऋतु (माघ–फागुन)मा पानी तपतप चुहिरहन्छ । सधैँ रोएजस्तो देखिने भएकाले यसलाई रुदन्ती भनिएको हो । रुदन्ती बुटीलाई गाँजासँग मिलाएर खाँदा मानिसलाई तीन महिनासम्म भोक लाग्दैन र यसले शरीरमा ताप सिर्जना गराएर जाडो छल्छ । त्यतिवेलाका बाबाले अन्न त्याग गर्न रुदन्ती बुटीलाई गाँजामा मिलाएर खाने गर्थे ।
शिवले आविष्कार गरेको थेरापी
भष्मबारे भन्नुपर्दा सुवर्ण भष्म, मुगा भष्म र मोती भष्मबारे समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । सुनलाई भष्म गराउन सकिँदैन । तर, आयुर्वेदमा सुन बनाउने रासायनिक प्रक्रिया र यसलाई भष्म गराउने विधिबारे उल्लेख छ । रुकुममा पाइने सिमतामा (तामाको प्रकार), रुदन्ती बुटी र ठोस बनाइएको पारो मिलाउने हो भने सुन बन्छ । सुनलाई भष्म गराएपछि यसलाई सुवर्ण भष्म भनिन्छ । यस्तो भष्म खाँदा भोक लाग्दैन । मोती पानीबाट बनेको हुन्छ । मोती भष्म खाँदा प्यास लाग्दैन । त्यस्तै मुगालाई भष्म बनाएर खाँदा यसले मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ । यो टनिक हो ।
भष्म र गाँजा सेवन गर्ने यो कुनै तान्त्रिक होइन । यो विशुद्ध आयुर्वेदमाथि आधारित छ । यो विधिलाई भगवान् शिवले आविष्कार गरेका हुन् । उनी कैलाश पर्वतजस्तो चिसो ठाउँमा बस्ने गर्थे । त्यस्तो जाडो ठाउँमा त्यागको अभ्यास गर्न तथा प्रकृतिलाई वशमा राख्न उनले आविष्कार गरेको यो थेरापीलाई नागा बाबाले अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
प्रस्तुति : सुजित मैनाली
तस्बिर : सतिश पोखरेल/नयाँ पत्रिका
Previous Previous post: को हुन् मेगन मार्कल?
Next Next post: हिजो सम्म त यो यहाँ थिएन